HomeKnowledgeသငျမသိသေးတဲ့ အိန်ဒိယမှ တခွားဂွိုဟျတဈခုအလား ထူးဆနျးအံ့သွဖှယျရာမြား
ကမ်ဘာပျေါက လူဦးရေ အမြားဆုံ6းနိုငျငံထဲ တဈနိုငျငံ ဖွဈတဲ့၊ ဘာသာစကားပေါကျစ 1600 ကြျော ရှိတဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ သာမနျ နိုငျငံတော့ မဟုတျပါဘူး။ မွပွေငျ အနအေထား၊ အဝတျ အစား၊ ရာသီဥတုတှကေ တခွားနိုငျငံတှနေဲ့ မတူဘဲ ကှဲပွားနေ ပါတယျ ။
1. ကမ်ဘာပျေါမှာ ရာသီဥတု လေးမြိုး ရှိပမေယျ့ အိန်ဒိယမှာ ရာသီဥတု ခွောကျမြိုး ရှိပါတယျ။
၁။ နှဦေး - ဖဖေျောဝါရီလလယျမှ ဧပရယျ လလယျ အထိ
၂။ နှရောသီ - ဧပရယျလလယျမှ ဇှနျလလယျ အထိ
၃။ မုတျသုံရာသီ - ဇှနျလလယျမှ ဩဂုတျလလယျအထိ
၄။ ဆောငျးဦးရာသီ - ဩဂုတျလလယျမှ အောကျတိုဘာလလယျအထိ
၅။ ဆောငျးကွိုရာသီ - အောကျတိုဘာလလယျမှ ဒီဇငျဘာလလယျအထိ
၆။ ဆောငျးရာသီ - ဒီဇငျဘာလလယျမှ ဖဖေျောဝါရီလလယျအထိ
2. ကမ်ဘာပျေါမှာ ဘာသာစကားပေါငျး 8000 ခနျ့ ရှိပွီး အိန်ဒိယ တဈနိုငျငံတညျး မှာတငျ ဘာသာစကားပေါငျး 1600 ရှိပါတယျ။
ဘာသာစကား 122 မြိုးကို အဓိက ပွောဆိုကွပါတယျ။ 122 မြိုးထဲက 30 ကို လူအမြားဆုံး အသုံးပွုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိန်ဒိကက ကမ်ဘာပျေါမှာ အင်ျဂလိပျဘာသာ စကားကို အပွောမြားဆုံး နိုငျငံဖွဈပါတယျ။
3. အိန်ဒိမှာ ပလကျစတဈတှကေို ကြူရှငျလခအနနေဲ့ ပေးလို့ရတဲ့ ကြောငျးတဈကြောငျး ရှိပါတယျ။
ဒီကြောငျးလေးက ပလကျစတဈတှကေို ကြူရှငျလခ အနနေဲ့ပေးလိုရတဲ့အခါ ကလေးတှအေတှကျ အဆငျပွပွေီး ပလကျစတဈတှကေို သနျ့ရှငျးပွီးသားလညျး ဖွဈသှားပါတယျ။
4. အိန်ဒိယမှာ ဟှနျးတီးလို့ ရပါတယျ။ အိန်ဒိယက ထရပျကားတှမှော ကြေးဇူးပွုပွီး ဟှနျးတီးပါလို့ ရေးထားတတျ ပါတယျ။ လမျးမပျေါမှာ ကားတဈစီးကို ကြျောတကျမယျ ဆိုရငျ ဟှနျးတီးရပါတယျ။ အိန်ဒိယ ရောကျရငျတော့ ဟှနျးသံကို အမွဲကွားရမှာပါ။
5. တဈကမ်ဘာလုံးမှာ သဈပငျတှေ နညျးပါးလာခြိနျမှာ အိန်ဒိယမှာတော့ သဈပငျတှေ တိုးသထကျ တိုးလာပါတယျ။
NASA ရဲ့ထုတျပွနျခကျြ အရ နှဈပေါငျး 20 အတှငျးမှာ တဈကမ်ဘာလုံး သဈတောပွုနျးတီးလာပမေယျ့ အိန်ဒိမှာတော့ သဈပငျတှေ ပိုမြားလာ ပါတယျ။ 2017 ခုနှဈတုနျးက အိန်ဒိယမှာ 12 နာရီအတှငျး ပြိုးပငျပေါငျး 66 သနျးကို စိုကျပြိုးပွီး ကမ်ဘာ့စံခြိနျ တငျခဲ့ပါတယျ။
6. အမြိုးသား အခငျြးခငျြး ဖကျပွီး လကျကိုငျလေ့ ရှိကွပါတယျ။
အမြိုးသားတှကေ ပထမဆုံးတှတေဲ့ အခါ တဈယောကျကို တဈယောကျ ဖကျပွီး နှုတျဆကျကွပါတယျ။ ပွီးတော့ စကားပွောရငျလညျး တဈယောကျလကျကို တဈယောကျ ကိုငျပွီး ပွောကွပါတယျ။
7. အိန်ဒိယမှာ နစေ့ဉျ ရထားနဲ့ခရီးသှားသူဟာ ဩစတွီးယားနိုငျငံ လူဦးရနေဲ့ ညီမြှပါတယျ။
အိန်ဒိယဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ လူဦးရအေထူဆုံး နိုငျငံဖွဈပါတယျ။ နစေ့ဉျရထားနဲ့ခရီးသှားသူတှဟော မနညျးလှပါဘူး။
8. အိန်ဒိယရောကျရငျ ငှကွေေးနဲ့ပတျသကျပွီး စိတျပူစရာမလိုပါဘူး။
အရာရာဟာ ဈေးသကျသာပါတယျ။ အိန်ဒိယမှာ စားစရာတှကေ ဈေးသကျသာသလို ဟျောတယျမှာတဈညတညျးရငျ 15 ဒျေါလာထကျတောငျ နညျးပါသေးတယျ။
9. သကျသကျလှတျ အစားအစာတှကေို မကျဒေါနယျမှာ ရနိုငျပါတယျ။
McAloo Tikki ဆိုတလညျး ရှိပါသေးတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ အသားစားမှု အနညျးဆုံး နိုငျငံဖွဈပါတယျ။ လူဦးရရေဲ့ 80 ရာခိုငျနှုနျးဟာ ဟိန်ဒူဘာသာကို ကိုးကှယျလို့ပါ။
10. အိန်ဒိယမှာ ခွဟေနျလကျဟနျ အမူအရာတှကေို အဓိပ်ပါယျ ကောကျမှူက ထူးခွားပါတယျ။ ခေါငျးငွိမျ့ပွရငျ လကျခံတယျ၊ ဟုတျတယျ၊ သဘောတူတယျလို့ တဈကမ်ဘာလုံးက လကျခံထားကွ ပါတယျ။ အိန်ဒိယမှာ ခေါငျးငွိမျ့ပွတာက ငွငျးဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
11. အိန်ဒိယမှာ ကရကျကဈ ကစားနညျးကို ဘာဘာရေး တဈခုလိုပဲ အလေးထားကွ ပါတယျ။
ကရကျကဈ ကစားနညျးကို အရူးအမူး ဝါသနာပါကွ ပါတယျ။ အိန်ဒိယ ရောကျရငျ ကရကျကဈ ကစားကွညျ့ဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
12. အိန်ဒိယက အိမျသာတှမှော အိမျသာသုံး စက်ကူတှကေို တှရေ့မှာ မဟုတျပါဘူး။
အိန်ဒိယမှာ အိမျသာသုံးစက်ကူကို မသုံးကွပါဘူး။ ရကေိုပဲ သုံးကွပါတယျ။
13. ဘဏျရဲ့ရှတေံ့ခါးကို သော့မခတျတဲ့ မွို့တဈမွို့ ရှိပါတယျ။
Shani Shingnapur မွို့မှာ နထေိုငျသူတှကေ အိမျတံခါးတှကေို သော့မခတျကွ ပါဘူး။ဘုရားသခငျက စောငျ့ရှောကျ ကာကှယျတယျလို့ ယုံကွညျလို့ပါ။ အဲဒီမွို့ရဲ့ ပထမဆုံးဘဏျကို 2011 ခုနှဈမှာ ဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီး ဘဏျတံခါးကိုလညျး သော့မခတျ ပါဘူး။
14. ကြားထိုးနညျးနဲ့ လှကေားထဈ ကစားနညျးကို အိန်ဒိယနိုငျငံက စတငျခဲ့ ပါတယျ။
ကြားထိုးနညျးက AD6ရာစုကတညျးက အိန်ဒိယမှာ ရှိခဲ့တာပါ။
15. အိန်ဒိယဟာ ပှဲတျောတှေ ပွညျ့နတေဲ့ နိုငျငံပါ။
အိန်ဒိယလူမြိုးတှကေ ဘာသာတရား ကိုငျးရှိုငျးတာကွောငျ့ ဘာသာရေး ပှဲတျောတှကေလညျး တဈနှဈပတျလုံးပါပဲ။ Holi ပှဲတျောက နှရောသီမှာ ပွုလုပျပွီး အရောငျပါတဲ့ရေ၊ အရောငျစုံမှုနျ့တှနေဲ့ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ပကျကွပါတယျ။
16. အိန်ဒိယဟာ မိနျးမခြောတှေ စုဝေးနတေဲ့ နိုငျငံပါ။
ဘောလိဝုဒျ ရုပျရှငျမငျးသမီးတှကေို ကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ အိန်ဒိယအမြိုးသမီးတှေ ဘယျလောကျလှလဲ ဆိုတာ သိနိုငျမှာပါ။ မယျကမ်ဘာပွိုငျပှဲမှာ အိန်ဒိယက ဆု 6ခါရဖူးပါတယျ။
သင်မသိသေးတဲ့ အိန္ဒိယမှ တခြားဂြိုဟ်တစ်ခုအလား ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာများ
ကမ္ဘာပေါ်က လူဦးရေ အများဆုံ6းနိုင်ငံထဲ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့၊ ဘာသာစကားပေါက်စ 1600 ကျော် ရှိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ သာမန် နိုင်ငံတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြေပြင် အနေအထား၊ အဝတ် အစား၊ ရာသီဥတုတွေက တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ မတူဘဲ ကွဲပြားနေ ပါတယ် ။
1. ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရာသီဥတု လေးမျိုး ရှိပေမယ့် အိန္ဒိယမှာ ရာသီဥတု ခြောက်မျိုး ရှိပါတယ်။
၁။ နွေဦး - ဖေဖော်ဝါရီလလယ်မှ ဧပရယ် လလယ် အထိ
၂။ နွေရာသီ - ဧပရယ်လလယ်မှ ဇွန်လလယ်အထိ
၃။ မုတ်သုံရာသီ - ဇွန်လလယ်မှ ဩဂုတ်လလယ်အထိ
၄။ ဆောင်းဦးရာသီ - ဩဂုတ်လလယ်မှ အောက်တိုဘာလလယ်အထိ
၅။ ဆောင်းကြိုရာသီ - အောက်တိုဘာလလယ်မှ ဒီဇင်ဘာလလယ်အထိ
၆။ ဆောင်းရာသီ - ဒီဇင်ဘာလလယ်မှ ဖေဖော်ဝါရီလလယ်အထိ
2.ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာစကားပေါင်း 8000 ခန့် ရှိပြီး အိန္ဒိယ တစ်နိုင်ငံတည်း မှာတင် ဘာသာစကားပေါင်း 1600 ရှိပါတယ်။ ဘာသာစကား 122 မျိုးကို အဓိက ပြောဆိုကြပါတယ်။ 122 မျိုးထဲက 30 ကို လူအများဆုံး အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိကက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားကို အပြောများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
3. အိန္ဒိမှာ ပလက်စတစ်တွေကို ကျူရှင်လခအနေနဲ့ ပေးလို့ရတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်း ရှိပါတယ်။
ဒီကျောင်းလေးက ပလက်စတစ်တွေကို ကျူရှင်လခ အနေနဲ့ပေးလိုရတဲ့အခါ ကလေးတွေအတွက် အဆင်ပြေပြီး ပလက်စတစ်တွေကို သန့်ရှင်းပြီးသားလည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။
4. အိန္ဒိယမှာ ဟွန်းတီးလို့ ရပါတယ်။ အိန္ဒိယက ထရပ်ကားတွေမှာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဟွန်းတီးပါလို့ ရေးထားတတ် ပါတယ်။ လမ်းမပေါ်မှာ ကားတစ်စီးကို ကျော်တက်မယ် ဆိုရင် ဟွန်းတီးရပါတယ်။ အိန္ဒိယ ရောက်ရင်တော့ ဟွန်းသံကို အမြဲကြားရမှာပါ။
5. တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သစ်ပင်တွေ နည်းပါးလာချိန်မှာ အိန္ဒိယမှာတော့ သစ်ပင်တွေ တိုးသထက် တိုးလာပါတယ်။ NASA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် အရ နှစ်ပေါင်း 20 အတွင်းမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး သစ်တောပြုန်းတီးလာပေမယ့် အိန္ဒိမှာတော့ သစ်ပင်တွေ ပိုများလာ ပါတယ်။ 2017 ခုနှစ်တုန်းက အိန္ဒိယမှာ 12 နာရီအတွင်း ပျိုးပင်ပေါင်း 66 သန်းကို စိုက်ပျိုးပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန် တင်ခဲ့ပါတယ်။
6. အမျိုးသား အချင်းချင်း ဖက်ပြီး လက်ကိုင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ အမျိုးသားတွေက ပထမဆုံးတွေတဲ့ အခါ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖက်ပြီး နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ စကားပြောရင်လည်း တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက် ကိုင်ပြီး ပြောကြပါတယ်။
7. အိန္ဒိယမှာ နေ့စဉ် ရထားနဲ့ခရီးသွားသူဟာ ဩစတြီးယားနိုင်ငံ လူဦးရေနဲ့ ညီမျှပါတယ်။ အိန္ဒိယဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေအထူဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ရထားနဲ့ခရီးသွားသူတွေဟာ မနည်းလှပါဘူး။
8. အိန္ဒိယရောက်ရင် ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။အရာရာဟာ ဈေးသက်သာပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ စားစရာတွေက ဈေးသက်သာသလို ဟော်တယ်မှာတစ်ညတည်းရင် 15 ဒေါ်လာထက်တောင် နည်းပါသေးတယ်။
9. သက်သက်လွတ် အစားအစာတွေကို မက်ဒေါနယ်မှာ ရနိုင်ပါတယ်။ McAloo Tikki ဆိုတလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အသားစားမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေရဲ့ 80 ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဟိန္ဒူဘာသာကို ကိုးကွယ်လို့ပါ။
10. အိန္ဒိယမှာ ခြေဟန်လက်ဟန် အမူအရာတွေကို အဓိပ္ပါယ် ကောက်မှူက ထူးခြားပါတယ်။ ခေါင်းငြိမ့်ပြရင် လက်ခံတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ သဘောတူတယ်လို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံထားကြ ပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ခေါင်းငြိမ့်ပြတာက ငြင်းဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
11. အိန္ဒိယမှာ ကရက်ကစ် ကစားနည်းကို ဘာဘာရေး တစ်ခုလိုပဲ အလေးထားကြ ပါတယ်။ ကရက်ကစ် ကစားနည်းကို အရူးအမူး ဝါသနာပါကြ ပါတယ်။ အိန္ဒိယ ရောက်ရင် ကရက်ကစ် ကစားကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
12. အိန္ဒိယက အိမ်သာတွေမှာ အိမ်သာသုံး စက္ကူတွေကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိန္ဒိယမှာ အိမ်သာသုံးစက္ကူကို မသုံးကြပါဘူး။ ရေကိုပဲ သုံးကြပါတယ်။
13. ဘဏ်ရဲ့ရှေ့တံခါးကို သော့မခတ်တဲ့ မြို့တစ်မြို့ ရှိပါတယ်။
Shani Shingnapur မြို့မှာ နေထိုင်သူတွေက အိမ်တံခါးတွေကို သော့မခတ်ကြ ပါဘူး။ဘုရားသခင်က စောင့်ရှောက် ကာကွယ်တယ်လို့ ယုံကြည်လို့ပါ။ အဲဒီမြို့ရဲ့ ပထမဆုံးဘဏ်ကို 2011 ခုနှစ်မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဘဏ်တံခါးကိုလည်း သော့မခတ် ပါဘူး။
14. ကျားထိုးနည်းနဲ့ လှေကားထစ် ကစားနည်းကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက စတင်ခဲ့ ပါတယ်။ ကျားထိုးနည်းက AD6ရာစုကတည်းက အိန္ဒိယမှာ ရှိခဲ့တာပါ။
15. အိန္ဒိယဟာ ပွဲတော်တွေ ပြည့်နေတဲ့ နိုင်ငံပါ။
အိန္ဒိယလူမျိုးတွေက ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းတာကြောင့် ဘာသာရေး ပွဲတော်တွေကလည်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးပါပဲ။ Holi ပွဲတော်က နွေရာသီမှာ ပြုလုပ်ပြီး အရောင်ပါတဲ့ရေ၊ အရောင်စုံမှုန့်တွေနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပက်ကြပါတယ်။
16. အိန္ဒိယဟာ မိန်းမချောတွေ စုဝေးနေတဲ့ နိုင်ငံပါ။
ဘောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လောက်လှလဲ ဆိုတာ သိနိုင်မှာပါ။ မယ်ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲမှာ အိန္ဒိယက ဆု 6ခါရဖူးပါတယ်။